[Zawgyi] အလွန်စီးပွားရှာတတ်သော ဂျူးလူမျိုးနဲ့ တရုတ်လူမျိုးတို့ စီးပွားပျက်သွားသောအခါ တစ်ခါက အလွန်ချမ်းသာကြတဲ့ ဂျူး ကုန်သည် တစ်ယောက် နဲ့ တရုတ် ကုန်သည် တစ်ယောက် ဘေးချင်းကပ်လျက် ဈေးရောင်း ပြီး စီးပွါးရေး ပြိုင်နေကြသတဲ့။Customer များများ ရရန် အပြိုင်အဆိုင် အားကျမခံ ဈေးချ ရင်းနဲ့ ကြာလာတော့ နှစ်ယောက်စလုံး မွဲသွားသတဲ့။ ဒီတော့ တရုတ် က ရုံးတော်ကိုသွားပြီး၊ လူမွဲစာရင်း ဝင်ဖို့ လျှောက် လိုက်တော့၊ ရှိတဲ့ အကြွေးတောင် ဆပ်စရာ မလိုသည့် အပြင် တောင်းစား ခွင့်လိုင်စင် ပါ ရသတဲ့။ ဒါနဲ့ သူ့ ဆိုင်ခန်းကို ပိတ်လိုက်ပြီး လမ်းဘေးမှာ …
[Zawgyi] လည်ချောင်းနာတဲ့ သူများအတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း အမှန်တကယ် သက်သာပျောက်ကင်းစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်း ဒီတစ်ခါ အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်းနာတဲ့ သူတွေအတွက် နာရီပိုင်း အတွင်း သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်းတွေ ကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ အာသီးရောင် ခြင်းကို (Tonsillitis) လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဘာ့ကြောင့် အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်းနာရသလဲ ဆိုတော့က ဆောင်းကုန်နွေကူးပြီး နွေအခါရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အပူဓာတ်များလွန်ကဲပြီး အာသီးရောင်၍ လည်ချောင်းနာတတ်ပါတယ်။ အခုလို ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ ရေများများသောက်ပါ။ ဝမ်းမချုပ်ပါစေနှင့် အသီးအနှံများများစားသုံးပေးပါ။ အာသီးရောင်တဲ့ လက္ခဏာဟာ အစားအစာများ မြိုချပါက လည်ချောင်းအတွင်း ခံစားရခက်အောင် နာကျင်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့ ပထမ အဦးဆုံး ရေနွေးဖြူထဲသို့ အိမ်သုံးဆား တစ်ဇွန်းခန့်ထည့်၍ …
“ကောင်းလွန်းလို့ ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ဖတ်ဖြစ်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်”ဖတ်ပြီးလျှင်လည်း တစ်ပါးသူများကို ပြန်လည်ပို့ချပေးပါ။
[Zawgyi] “ကောင်းလွန်းလို့ ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ဖတ်ဖြစ်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်”ဖတ်ပြီးလျှင်လည်း တစ်ပါးသူများကို ပြန်လည်ပို့ချပေးပါ။ ၁။ ဝင်ငွေမကောင်းတဲ့အခါ ချွေတာသုံးစွဲတာ အကောင်းဆုံး ယတြာ။ ၂။ လမ်းသွားတဲ့အခါ ကြီးမားတဲ့ဝီရိယထားခြင်းဟာ အန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ။ ၃။ ရန်လိုနေတဲ့လူနဲ့ ဖက်ပြိုင်ပြီးမငြင်းတာ အကောင်းဆုံး ယတြာ။ ၄။ ဒေါသထွက်စရာ ကြုံတဲ့အခါ စိတ်ဖြေသာတဲ့နေရာကို ရှောင်ထွက်သွားခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး ယတြာ။ ၅။ မနာလိုဝန်တိုစိတ်ကိုမမွေးအောင် ကံကံရဲ့အကျိုး လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားတာ အကောင်းဆုံး ယတြာ။ ၆။ စိတ်ကောင်းထားခြင်း ရိုးသားမှုရှိခြင်းဟာ ကြီးပွားရာ ကြီးပွားကြောင်း အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ။ ၇။ အားလပ်ချိန်မှာ စာဖတ်တဲ့အကျင့်ကို မွေးမြူခြင်းဟာ အသိအလိမ္မာတိုးတက်စေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ။ …
[Zawgyi] ဖတ်သွားသူတိုင်း သန်းပေါင်းများစွာသော လူများထက် ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဖတ်သွားသူတိုင်း သိသွားပါပြီ… ကံထူးရှင်တိုင်း ဖတ်ခွင့်ရမည်။ဖတ်သွား ရှဲသွားသူတိုင်း ကမ္ဘာမှာ သန်းပေါင်းများစွာသော လူများထက် ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဖတ်သွားသူတိုင်း သိသွားပါပြီ။သင့် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ စားစရာရှိနေတယ်။ခါးကိုအလှဆင်ဖို့ရာ အဝတ်အစားတွေရှိနေတယ် ။သင့်ခေါင်းပေါ်မှာ ခေါင်မိုးတစ်ခုရယ် …နောက်ကျောခင်းအိပ်စရာ နေရာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေထက် ပိုမိုချမ်းသာပါတယ် ။ သင့် ဘဏ်ထဲမှာရော သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာရောနောက်ပြီး အလွယ်သုံးစရာ အကြွေငွေစလေးတွေရှိနေရင် သင်ဟာ ကမ္ဘာမှာ (၈) ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်ရှိတဲ့ …ချမ်းသာသူ စာရင်းဝင်ဖြစ်နေပါပြီ ။သင်ဟာ ဒီကနေ့မနက်မှာ နေမကောင်းဖျားနာဘာမှမဖြစ်ဘဲ အိပ်ရာက ကျန်းမာစွာ နိုးထလာတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကမ္ဘာမှာအသက်မရှင်နိုင်တော့တဲ့ သန်းနဲ့ချီ …
ရှားစောင်းလက်ပတ်စားရင် ရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
[Zawgyi] ရှားစောင်းလက်ပတ်စားရင် ရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ ၁။ သွေးတွင်း သကြားဓာတ် ပမာဏကိုလျှော့ချပေးခြင်း လူနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေမှာ လေ့လာထားတဲ့ လေ့လာမှုတွေမှာ ရှားစောင်းလက်ပတ် စားသုံးခြင်းကသွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကိုလျှော့ချပေးကြောင်း သိရပါတယ်။သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို အဓိက ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ အင်ဆူလင်ရဲ့ sensitivity ကို ကောင်းစေလို့ ဒီအာနိသင်ကို ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ၂။ ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေခြင်း ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ရောင်ရမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အရာတွေကို တားဆီးပေးတာမို့ အရောင်ကျစေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ၃။ သွားကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းမွန်ခြင်း ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို ဖျော်ကာ ပလုတ်ကျင်းခြင်းက သွားချေးကပ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ပါးစပ်ထဲက အနာတွေကို လျင်မြန်စွာ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ၄။ မှတ်ဉာဏ်အားကောင်းစေခြင်း စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို …
[Zawgyi] “မိန်းကလေးတွေ သတိပေးချင်လို့ ကိုယ်ချစ်လည်း မရှာနဲ့ သူချစ်လည်း မရှာပါနဲ့ လူစိတ်ရှိတဲ့လူကိုပဲ ရှာကြပါ” (ဖြစ်ရပ်မှန်) ကျွန်မသူငယ်ချင်းက နှလုံးရောဂါ ရှိတယ် ကလေးယူမရဘူးလို့ ဆရာဝန်မှာထားတယ် သူ့ယောက်ကျားက ကလေးလိုချင်တယ် ကလေးယူပေးလို့ ခနခနပြောတယ်။(4.12.2019) သူ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီး ကျွန်မနဲ့ပြောပြလာတယ် ကျွန်မကမယုံဘူးမယုံဘူး နင်ငါရှေ့မာဆီးစစ်ပြဆိုပြီး သူကစစ်ပြပေးတယ် ကျွန်မကပျော်လေပျော်တယ် စိတ်လေပူတယ် သူက ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး ဆရာဝန်လေကလေးယူရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့မှာထားတယ် ကျွန်မစိတ်ပူနေမိတယ် ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့အကြောင်းသူယောကျာ်းနဲ့ သူပြောပြတယ် သူယောကျာ်းပျော်မယ်လို့ထင်ထားတယ် ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဖျက်ချဖို့ပြောလာတယ်။ နင်ပဲလိုချင်တယ် ငါရတော့မှ ဖျက်ချဖို့ဆိုတာ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရပြီးတယ်နောက်ပိုင်း သူယောကျာ်း သူ့ကိုနည်းနည်းလေးမှ ဂရုမစိုက်တော့ဘူး အိမ်မှာမနေဘူး သူကနှလုံးရောဂါရှိတယ်လေ စိတ်ဓာတ်ကျတယ် စားမဝင်အိပ်မပျော်တော့ဘူး။ကျွန်မက အားပေးစကားပြောတယ် သူ့နဲ့အဖော်နေပေးတယ် …
[Zawgyi] သင်၏ဘ၀ထဲကို ကံဆိုး မိုးမှောင်မှုတွေ ရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတာကို ညွှန်ပြနေသော နမိတ်(၅) မျိုး တစ်ခုခုကို လုပ်တော့မယ့်အခါ မလုပ်သင့်ဘူး၊ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် နိမိတ်တချို့ပြတတ်သလို ၊ တစ်နေရာရာကို သွားသင့်လား မသွားသင့်လား ဆိုတာလည်း သွားခါနီးရင် နိမိတ်လေးတွေ ပြတတ်ပါတယ်။နိမိတ်ကိုယုံတဲ့သူတွေအတွက် နေရာတစ်နေရာသွားခါနီး၊တစ်ခုခုလုပ်ခါနီးမှာ ဖြစ်လာတတ်တဲ့နိမိတ်လေးတွေကို သိပြီးရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်၏ဘ၀ထဲကို ကံဆိုး မိုးမှောင်မှုတွေ ရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတာကို ညွှန်ပြနေသော နမိတ်(၅) မျိုး (1)ခလုတ်တိုက်ရင် တစ်ခုခုလုပ်ခါနီး၊တစ်နေရာရာသွားခါနီးမှာ ခဏခဏခလုတ်တိုက်နေရင် မလုပ်သင့်မသွားသင့်သေးပါဘူး။ (2)အလိုလိုစိတ်ညစ်ညူးနေရင် တခါတ လေစိတ်က အလိုလိုမကြည်နေတာမျိုး၊ စိတ်မရှည်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တာက စိတ်ခံစားချက်သက်သက်လို့လည်း ပြောလို့ရသလို၊ နိမိတ်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်အနေနဲ့စိတ်မကြည်လင်ဘူး၊ စိတ်ညစ်ညူးနေမယ်ဆိုရင် သင်လုပ်မယ့်အရာတစ်ခုက အဆင်ပြေဖို့သိပ်မဖြစ် …
“ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ငွေရှာရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပြီမထင်ပါနဲ့”
[Zawgyi] “ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ငွေရှာရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပြီမထင်ပါနဲ့” စကားတစ်ခွန်းက လက်ဆောင် တစ်ခုထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။မိန်းမ ရော့ မင်းကြိုက်တာဝယ်၊ ကြိုက်တာ သုံးဆိုတဲ့ စကားထက်…. မိန်းမ အပြင် အတူသွားကြမယ်လေ ပြင်ဆင်လိုက်၊ ဘာလိုချင်လည်း လိုက်ဝယ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့၊ စကားအသုံးပြုမှုလေးက ပိုနွေးထွေး ကျေနပ်စေရတာပါ။မိန်းမ စားနှင့်ကွာ ဝမ်းမှ မဆုံတာဆိုတဲ့၊ … စကားထက်….. မိန်းမ ခဏတော့စောင့်ပေးနော်၊ ဗိုက်ဆာပေမယ့် အလုပ် မပီးသေးလို့ပါဆိုတဲ့၊ စကားအသွားအလာလေးက ပိုစိတ်ကျေနပ် စေရတာပါ။ မိန်းမ အိမ်အသုံးစရိတ်က ကုန်လှချည်လားဆိုတဲ့၊…. စကားထက်……. မိန်းမ ကုန်ဈေးနှုန်း အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ၊.. လောက်အောင် ချင့်ချိန်ဝယ်ကြည့်ပေါ့ကွာ… မလောက်ရင် …
သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ အိမ်ဖော်မလေးအပေါ်ရက်စက်ယုက်မာမှုကို အပြီးသတ် အမိန့်ချမည်ရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ
[Zawgyi] သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ အိမ်ဖော်မလေးအပေါ်ရက်စက်ယုက်မာမှုကို အပြီးသတ် အမိန့်ချမည်ရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာ အိမ်က အိမ်အကူမိန်းကလေးကို အက်ဆစ်နဲ့ ပက်တာ၊ တူနဲ့ထုတာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်တာတွေကြောင့် ရွှေပေါက္ကံမြို့နယ် ရဲစခန်းမှာ အမျိုးသမီးလေးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၄ ခုနဲ့ ဧပြီ ၇ ရက်နေ့က သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ အပါအဝင် ၄ ဦးတို့ကို ရွှေပေါက္ကံမြို့နယ် အမှုဖွင့်ခဲ့တာပါ။ တရားလိုဘက်က ရုံးပြောင်းလျှောက်ထားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာမယ့်ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ အပြီးသတ် အမိန့်ချမှတ်သွားမယ်လို့ ရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး ပြန်ကြားရေးအရာရှိ ဦးအောင်နေမျိုးက ပြောပါတယ်။ဇွန် ၁၂ ရက်နေ့က အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာကို …
[Zawgyi] မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ကြွခဲ့ပါသလဲ? ၁။ ပထမအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၄) ခုနှစ် ဒုတိယဝါ သက်တော် ၃၆ နှစ်တွင် ဖိုးဦးတောင် ( ပြည်မြို့အနီး ) သို့ကြွချီတော်မူသည်။ ပြည်ရွှေဆံတော် စေတီပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ ၂။ ဒုတိယအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ် ( ၁၁၁ )ခုနှစ် ဝါတော်( ၈ ) ဝါ သက်တော် ၄၃ နှစ်တွင် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ သထုံပြည်သို့ ရဟန္တာအရှင် ဂဝံပတိမထေရ်၏ ပင့်လျှောက်ချက်အရ ရဟန္တာ ( ၅၀၀ )တို့ နှင့်အတူ ကြွချီတော်မူသည်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ ၃။တတိယအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ် (၁၁၃) …
Total views : 2453718